တူရကီအတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားဌာနေ Transformer နှင့်အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များရောင်းအားအမှတ်တံဆိပ် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်ကမ္ဘာ့ဖလားဌာနေတူရကီ Transformer နှင့်အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များရောင်းအားအမှတ်တံဆိပ်
13 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်, ကမ္ဘာနှင့်အီလက်ထရောနစ် Turk အမှတ်တံဆိပ်ရောင်းချတစ်ဦးက Transformer
တူရကီ Elektra သည်အီလက်ထရောနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်အီလက်ထရွန်းနစ်၏အမှတ်တံဆိပ်, Transformer နှင့်လုံးဝအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကဆက်ပြောသည်အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များကိုနိုင်ငံပေါင်းနှင့်အတူဧရာမစီမံကိန်းအား660 တိုက်ကြီးအတွက်အမျိုးသားရေးမြို့တော်မှထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထုတ်ကုန်များတွင်အစ္စတန်ဘူလ်နယူးလေဆိပ်, Sabiha Gokcen လေဆိပ်, TCDD အကြမ်းဖျင်းနှင့်အစာရှောင်ရထားစီမံကိန်းများ, Marmaray နှင့်မြို့ဆေးရုံများအတွက်အဆောင်, နိုင်ငံခြားမှာတရုတ်မီးရထားလမ်း, ကွမ်ကျိုးစွန့်ပစ်ရေစီမံကိန်းများ, ထိုကဲ့သို့သောရုရှားသံမဏိစက်များအဖြစ်စီမံကိန်းများအတွက်ဆားဗီးလျှပ်စစ်အာဏာပိုင်အဖွဲ့နှင့်ထုတ်ကုန် Elektra သည်အီလက်ထရောနစ်ပါဝင်သည် ရှေ့ဆက်ရောက်လာရန်။3အတွက် 20 ကြီးထွားနိုင်အောင်တစ်ကြိုတင်တစ်နှစ်လုပ်နေချိန်မှာပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားရထားလမ်းစီမံကိန်းများ၏နောက်ဆုံး 2018 နှစ် Elektra သည်အီလက်ထရောနစ်လွှတ်ပျှမ်းမျှရာခိုင်နှုန်းကို xnumx'y အာဏာအရည်အသွေးကိုဖြေရှင်းချက်များနှင့်ကြီးထွားပေးခွငျးအားဖွငျ့ရှေ့ဆက်နေတဲ့အကြီးအခုန်အသကျရှငျနေတဲ့ဘူတာရုံရှိသည်။ တရုတ်နှင့်အမေရိက, ဂျာမနီအတွက်ကုမ္ပဏီ၏အတွက်တူရကီကုမ္ပဏီများသည် Elektra သည်အီလက်ထရောနစ်အရောင်းရုံးတို့တွင်အရှားပါးဖြစ်နိုင်သောအီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်ရောင်းဖို့တရုတ်။ 25 နှစ်ပေါင်း "Leap တစ်နှစ်တာ" ကိုကြွေးကြော်ကုမ္ပဏီများ, အစ္စတန်ဘူလ် Esenyurt အတွက်၎င်း၏လက်ရှိစက်ရုံဘဝနှစ်ဆလိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏စွမ်းရည်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ 2019 အထူးကြပ်မတ် R & D နဲ့ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာ, အင်ဂျင်နီယာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စွမ်းဆောင်, 40 ရှိနေစဉ် "Elektra သည်အီလက်ထရောနစ် R & D Center က" အဲဒီဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်, ဝန်ထမ်းအရေအတွက်နှင့်တူရကီအခိုငျအမာ Elektra သည် Elektronik အတွက်ဦးဆောင်နိမ့်ဗို့ Transformer နဲ့ဓာတ်ပေါင်းဖိုကဏ္ဍ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပို့ကုန်အချိုး, နှစ်ဦးစလုံးပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပဆောက်လုပ်ရေး, ရထားလမ်းစနစ်များ, လျှပ်စစ်, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, အလိုအလျောက်ထိုကဲ့သို့သောစက်ရုပ်နှင့်အဏ္ဏဝါအဖြစ်အဆင့်မြင့်နည်းပညာများအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောကဏ္ဍများ ဒါဟာသူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်နှင့်အတူထွက်ရပ်။ ကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းကို Elektra သည်အီလက်ထရောနစ် Transformer နှင့်အီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ပြီးအမျိုးသားမြို့တော်အပြည့်အဝပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုနိုင်ငံများနှင့်အတူ660 တိုက်ကြီးအတွက် Set; အစ္စတန်ဘူလ်နယူးလေဆိပ်, Sabiha Gokcen လေဆိပ်, TCDD အကြမ်းဖျင်းနှင့်အစာရှောင်ရထားစီမံကိန်းများတွင်တူရကီ, ထိုကဲ့သို့သော Marmaray နှင့်မြို့ဆေးရုံများအဖြစ်ရည်ညွှန်းစီမံကိန်းများနှင့်အတူအာရုံစူးစိုက်ထားပါတယ်။ တရုတ်နှင့်အမေရိကန်၌၎င်း, ကုမ္ပဏီ Elektra သည်အီလက်ထရောနစ်နှင့်အတူဂျာမနီမှာရောင်းအားရုံးများ; တရုတ်မျိုးဆက်သစ်ထုတ်ကုန်ကိုလည်းကွမ်ကျိုးစွန့်ပစ်ရေစီမံကိန်းများ, ဆားဗီးယနျးလျှပ်စစ်အာဏာပိုင်အဖွဲ့နှင့်ထိုကဲ့သို့သောရုရှားသံနှင့်သံမဏိစက်ရုံများအဖြစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီမံကိန်းများတွင်အဓိကကစားသမားအနေအထားနှင့်အတူ railways ။
တရုတ်အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များ၏ရောင်းအားလုပ်ဆောင်ခဲတဲ့လက်မှတ် ul တူရကီအတွက်ကဏ္ဍတစ်ခုတည်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမျဉ်းသားခဲ့သည်ထရန်စဖော်မာနှင့်ဓာတ်ပေါင်းဖိုအတွက် United States ကိုတင်ပို့ဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေစေသည်လည်းအတူ, သူတို့ကတူရကီကုမ္ပဏီများသည် Elektra သည်အီလက်ထရောနစ်အထွေထွေမန်နေဂျာထင်ပေါ်ကျော်ကြားလက်ဆောင်ပေးမယ် Sakar ကြားတွင်ဖြစ်ကြောင်းအလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ 2016 နှစ်ပေါင်းကတည်းကညွှန်ပြပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားရထားလမ်းစီမံကိန်းများအဲဒီစီမံကိန်းတွေဟာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာကုမ္ပဏီ၏ပျမ်းမျှတိုးတက်မှုနှုန်းနောက်ဆုံး3နှစ်ပေါင်း xnumx'y ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းအကျိုးစီးပွားများ "ဘူတာရုံလက်ဆောင်ပေးမယ် Sakar အာဏာအရည်အသွေးကိုဖြေရှင်းချက်ဖျော်ဖြေသိသိသာသာခုန်နေထိုင်ခဲ့ကြပါပြီ။ ယခင်နှစ်ကနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ယင်း 20 2018 ရာခိုင်နှုန်းကိုတိုးတကျမှုမှာတော့သူလုပ်ခဲ့တယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။
တရုတ်, အထူးသဖြင့်အတွင်းမီးရထားလမ်းဟာ Konya-တူရကီမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကိုအတွက်ပြည်တွင်းရထားလမ်းကိုကိုးကားစီမံကိန်းများအကြားသူတို့စီမံကိန်းများတွင်အသုံးပြုကြသည်ထုတ်ကုန်နှင့်အတူရှေ့ဆက်လာမယ့်ဟာသ, "Elektra သည်အီလက်ထရောနစ်ဖြစ်ကြသည် IKZ (Irmak-Karabük-Zonguldak) လိုင်း, Izmir Selcuk-summerhouse လိုင်း EKB (Eskisehir-Kütahyaနှင့်Balıkesir) လိုင်း, SAH (Samsun-ထူ) လိုင်း, Bama (Bandirma-Balikesir-Menemen) လိုင်း, Capital ရထားလမ်း (ATI), တူရကီမြောက်ပိုင်းကျန်းလိုင်းနှင့်တူရကီမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစင်တာ, Thrace (Edirne- Uzunköprü Tekirdag-Pehlivanköy) ဘူတာနှင့် Kayseri-Sivas -Çetinkaရဲ့ဂျီအက်စ်အမ်-R ကိုလိုင်း, "ဟု၎င်းကပြောသည်။
ဒါဟာ 2020 အတွက် R & D Center ကဖြစ်လာသတ်မှတ်
သူတို့ကအီလက်ထရွန်းနစ်စက်မှုလုပ်ငန်း 40 နှစ်များတွင်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြတဲ့ဟာသရောက်ရှိ, ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုသူတို့အိမျလုပ်ဆောင်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ခိုင်မာတဲ့ R & D လုပ်ငန်းများကို Transformer ၏ရလဒ်အဖြစ်ဓာတ်ပေါင်းဖိုများနှင့်အီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန်စက်မှုလုပ်ငန်းပထမဦးဆုံးဖျောပွဟာသဖြစ်ပြီးသူတို့ရှေ့ဆောင်ထုတ်ကုန်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့, 2020 ရှိနေစဉ် "Elektra သည်အီလက်ထရောနစ် R & D Center က" ကဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များအရည်အချင်းကိုအဖြစ်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာအသိအမြင်သူတို့အမှတ်တံဆိပ် Sakar ပိုမိုနှစ်သက်ကြီးမားတဲ့နှင့်ဂုဏ်သတင်းစီမံကိန်းများတွင်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကပြောသည်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပြင်ပတွင်သူပြောရက်နေ့တွင်ဆက်လက်; "Techniques အဖြစ်အလွယ်တကူစီမံကိန်းအတွက်သတ်မှတ်ချက်များပေးနိုငျခဲ့ပါသညျ။ ငါတို့သည်ပြည်တွင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန် Transformer မှတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်ရန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးမြင့်လက်မှတ်များ, အရည်အသွေးမြင့်မားအမြင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Pre-ရောင်းအားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့စ်အတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနှင့်ရေတိုပေးပို့စီမံကိန်းများကို Elektra သည်အမှတ်တံဆိပ်တိုက်ရိုက်သတ်မှတ်ချက်များအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ဝယ်လိုအားအဖြစ်ဓာတ်ပေါင်းဖိုများနှင့်အီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန်ပုံနှိပ်နေကြသည် featured ရှိသည်။ "
ကုမ္ပဏီရဲ့လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်စျေးကွက်၏ xnumx ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းပိုင်း, ထိုဖျောပွပု xnumx ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုဟာသပို့ကုန်ပါဝင်ပါသည်နေစဉ်, ပင်လယ်ရပ်ခြားစျေးကွက်ဝေစုနှင့်စီးပွားရေးအသံအတိုးအကျယ် "Leap တစ်နှစ်တာ" ၏လျင်မြန်သောအရှိန်အဟုန်နှင့်အတူတိုးနှင့်အတူတစ်နှစ် 50 သူတို့ကြေညာကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Sakar, ဤအခြေအနေတွင်အတွက် Esenyurt အတွက် operating စက်ရုံများ၏စွမ်းရည်, အစ္စတန်ဘူလ် 50 တထောင်စတုရန်းမီတာနှစ်ဆလျှင်မြန်စွာအလုပ်ဆက်လက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆောင်ခဲ့ဦးမည်ဟုဆိုသည်။ သူတို့ရာခိုင်နှုန်းကို 2019 ဖို့တစ်နှစ် 10 Sakar, 2019 2020 အကြားတင်ပို့မှုတိုးတက်နှုန်း၏အဆုံးအားဖြင့်သူတို့ရဲ့အလုပ်ပြီးမြောက်ရန်ရည်ရွယ်ဟုထဲမှာစက်ရုံတိုးတက်မှုနှင့်သက်တမ်းတိုးသူတို့ 70 ရာခိုင်နှုန်းကိုဖယ်ရှားခြင်းမျှော်လင့်ဟုပြောသည်။
boron ခွဲရုံ, 154 စီမံကိန်းသဘောတူညီချက်မှAraplıခွဲရုံနဲ့ Transmission Line Withdrawal Boğazköprüကေဗွီခွဲရုံနုဆုရှင် Fira နှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးရန် 26 / 02 / 2015 TCDD6။ Bor ခွဲရုံ, 154 စီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်မှAraplıခွဲရုံနဲ့ Transmission Line Withdrawal Boğazköprüကေဗွီခွဲရုံနုဆုရှင် Kurtmakas လျှပ်စစ်တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD)6နှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ရန်။ 12 နိုဝင်ဘာလ 2014 တစ်ရက်ဟာယယဇ်ပူဇော်သဖြင့်ဒေသတွင်းညွှန်ကြားမှု, စုဆောင်း "- Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - Boğazköprü 154 ရန်, FDI Bor ခွဲရုံ၏ Scope အတွင်းနိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုAraplıခွဲရုံများနှင့်နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုBoğazköprüခွဲရုံ Toprakkale လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံကိန်းကေဗွီဓာတ်အားလိုင်းများ Withdrawal ကိုဖန်ဆင်း" အသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနုနှင့်အတူမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, 1.371.662 အကြောင်းကို£ကုန်ကျ ...
ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်သုံးစွဲမှုမှလင့်ခ်လုပ်ထားသောတူရကီရဲ့စီးပွားရေးဇုန်ထ 06 / 12 / 2016 ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုခြင်းမှလင့်ခ်လုပ်ထားသောတူရကီရဲ့စီးပွားရေးဇုန်ထ: V ကိုTÜSAYDကစီစဉ်လျက်ရှိသည်။ တူရကီယ်ယူခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုထိပ်သီးအစည်းအဝေး, ပြည်တွင်းမှာဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူပြည်တွင်းပြည်ပကနေဝယ်ယူရေးပညာရှင်များအတူတကွယူဆောင် "ခိုင်ခံ့တူရကီဌာနေဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက်ရင်းမြစ်များအတွက်" ။3ဘီလီယံအထိအမေရိကန်ဒေါ်လာဆုံးဖြတ်ချက်၏ပါဝါကိုဝယ်ယူနှင့်အတူဒီဇင်ဘာလ၌ 25 ထိပ်သီးအစည်းအဝေး, အမျိုးသားစီးပွားရေးတိုးတက်မှုထောက်ခံပါတယ်။ ရေရှည်တည်တံ့သောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဝယ်ယူမှုချဉ်းကပ်မှု, ဝယ်အလုပ်အကိုင်ယ်ယူခြင်းမန်နေဂျာများနှင့် Professional ကtüsayderများ၏အစည်းအရုံး၏ရူပါရုံနှင့်အတူရှေ့မှောက်ဖို့ကော်ပိုရိတ်ကိုကိုးကားအတွက်ဝယ်ယူမှုအလုပ်အကိုင်အတွက်အမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာပလက်ဖောင်းအောင်ပင်အားကောင်းမစ်ရှင်, သည် "6 တည်းဖြတ်နိုင်သည်။ purchasing နှင့်ဤအတွက်ထောက်ပံ့ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုထိပ်သီးအစည်းအဝေး " ...
တူရကီပထမပြည်တွင်းထုတ်ကုန်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Initiatives လာရောက်ပူးပေါင်း 08 / 09 / 2018 စီးရီးကိုပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းxnumx.türkiyeမော်တော်ကားထုတ်လုပ်: မော်တော်ကား Vehbi Koc, တူရကီ၏ပစ်မှတ်တွေထဲက၌သူ၏အကျိုးစီးပွားများအတွက်လူသိများ ANADOL ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကားများထုတ်လုပ်ရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။ တူရကီအတွက် Ford Motor Company ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်မှာ 1 နှစ်ပေါင်း, ဒီရည်မှန်းချက်နားလည်သဘောပေါက်ရန်နည်းပြရဲ့ရည်မှန်းချက်ရောက်ရှိရန်သိသိသာသာadımdı.xnumxနှစ်မရွေးနှင့် Vehbi အမှတ်ခံခဲ့ရသောအခါ, Ford ကားနှင့်အတူဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပနှင့်အလုပ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ သူကနှစ်ဦးစလုံးသည်ဤလေ့လာမှုများကန့်သတ်အဆောက်အဦအဖြစ်အကုန်အကျများမှာ၏တစ်ခုခုလူသိများခဲ့သည်။ အသစ်သောရေးရာမှKoç Group မှသူလွယ်ကူသောဖြေရှင်းနည်းများရောက်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ Rahmi Koc အတူ 1946 (ထို Automotive Group ၏ Chairman) Bernar နာဟုံခုနှစ်တွင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောမော်တော်ယာဉ်ကုန်သည်တွေအပေါ်ကိုအသုံးပြုသည် ...
Altepe: တူရကီအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း Silkworm ကျနော်တို့ကိုပြသလိမ့်မယ် 07 / 12 / 2013 Altepe: ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနှင့်အတူ Silkworm .B အကယ်. ကျွန်တော်သူတို့တစ်တွေတူရကီအမှတ်တံဆိပ်လျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်ပြသကမ္ဘာ့အဆင့်မီဒေသခံလမ်းရထား Silkworm Bursa တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Recep Altepe ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်အတူတူရကီအမှတ်တံဆိပ်လျှောက်ထားကမ္ဘာ့အတန်းအစားဒေသခံလမ်းရထား Silkworm နှင့်အတူပြပွဲတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ကလည်း, တူရကီအမှတ်တံဆိပ်တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Recep Altepe ငှါကိုပြသ သူကပြောပါတယ်။ Altepe, တိုင်းပြည်အတွက်ဆက်လက်အရင်းအမြစ်များကိုဤအမျိုးအစားများကိုသစ်ကိုတံဆိပ်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Altepe သတိပေးထားဖို့လိုတင်ပို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း TR အခွံမာသီးကိုယူတူရကီမှ250 ကီလိုဂရမ်လေယာဉ်ပျံ, နည်းပညာများ၏သွင်းကုန်ကိုလျော့ချနိုင်ရန်အတွက်သူတို့ကမြို့ပြမြူနီစီပယ်အဖြစ်ပြည်တွင်းနည်းပညာအသုံးပြုမှုကိုအာရုံစိုက်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ ...
ကုမ္ပဏီဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါအနိုင်ရနှင့်အတူ Transformer ခွဲရုံနှင့်Pozantıတာရှုမွို့ 154 ကေဗွီ OHL Withdrawal စီမံကိန်း Center ကစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး 19 / 02 / 2015 TCDD6။ အဆိုပါ OHL Withdrawal စီမံကိန်းမှခွဲရုံနှင့်Pozantıတာရှုမွို့ 154 ကေဗွီခွဲရုံဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါအနိုင်ရ-Tek စွမ်းအင်တူရကီပြည်နယ်မီးရထားနဲ့စာချုပ် (TCDD)6လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ အသစ်သောဝယ်ယူရေးနှင့်စပ်လျဉ်း "အောင်၏ 07 ကေဗွီဓာတ်အားလိုင်းများဆုတ်ခွာဖို့နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတာရှုမွို့ခွဲရုံများနှင့်နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုPozantıခွဲရုံ၏ Scope အတွင်း Toprakkale လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံကိန်း - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - - Adana Boğazköprü" 2014 နိုဝင်ဘာလ 154 တစ်ရက်ပြုသောပူဇော်သက္ကာထဲကဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု, စုဆောင်း ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, အဆိုပါအနီးစပ်ဆုံးကုန်ကျစရိတ် 1.029.904 808.000 လေလံနှုန်းလေလံနှုန်းအဖြစ်ဆုံးဖြတ် ...
ပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားရေးထုတ်လုပ် GEN အမှတ်တံဆိပ်ကားအသစ် 20 / 10 / 2018 လျှပ်စစ်ပြည်တွင်းမော်တော်ယာဉ် R & D နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြသနိုင်ခဲ့သည်။ မော်တော်ကား R & D အသုံးစရိတ်အတွက်ပိုက်ဆံမြင်းကောင်ရေအားမြင်းကောင်ရေ 150 203 နှစ်အတွင်းဒေါ်လာသန်းခဲ့အင်ဂျင်ပါဝါ kW 5, 6,5 ။ သတင်းများအရပြီးနောက်6လအတွင်းပင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုကိုစတင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဆိုပါ 480 100 10 ခုနှစ်တွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြုန်း TM အလိုအလျောက်ပေါင်ကီလိုမီတာ။ အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း, အပြင်ပန်းဒီဇိုင်း, စက်မှုဒီဇိုင်းအားလုံးကိုယ်ထည်နှင့်အင်ဂျင် cowling ဇာတိ။ မော်တော် drives တွေကို, အလိုအလျောက် GEN အားလုံးကိုဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲများအတွက်အီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်မှုယူနစ်။ 2014 ဒေါက်တာထဲမှာ GEN ကားများ Gursel Fine အားဖြင့် 100% ပြည်တွင်းမြို့တော်နှင့်အတူတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးရှေ့ပြေးပုံစံမော်တော်ယာဉ်ကိုစမ်းသပ် ...
မှောင်ခိုလောင်စာဆီရောင်းချနေကုန်သည်တွေ၏ကာကွယ်ရေး TCDD site ကိုမှမေးမွနျးခဲ့သညျ 17 / 09 / 2013 မှောင်ခိုလောင်စာဆီရောင်းချနေကုန်သည်တွေ၏ကာကွယ်ရေး TCDD site ကိုမှမေးမွနျးခဲ့သညျ: အရှေ့တိုင်းလောင်စာလိမ်လည်မှုည့်စားတတ်သောလိပ်စာ၏ရထားလမ်း၌ဤအချိန်ပြံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ Aydin TCDD အတွက် site ကိုပေါက်ကြားဖို့လောင်စာဆီရောင်းသောအရောင်းဆိုင်များ၏ကာကွယ်ရေးလောင်စာကဏ္ဍမှာအခွန်ဆုံးရှုံးမှုကိုရပ်တန့်ဘာကြောင့်မသိရပါဘူးဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာ၏မှောင်ခိုကိုရပ်တန့်ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ လူကုန်ကူးသူများ၏ပြစ်ဒဏ်၏တရားဝင်ပြန်တမ်းထုတ်ဝေစွမ်းအင်စျေးကွက်စည်းမျဉ်းအာဏာပိုင် (EMRA) သည်သတ္တုပါးဖော်ပြခဲ့တယ်။ EMRA, စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပြစ်ဒဏ်များဖြန့်ဖြူးသည့်ကုမ္ပဏီရလဒ်အဖြစ်ထက်ပိုနေတဲ့တထောင်ကုန်သည်တွေဖြတ်ကာကွယ်ရေးလည်းအချို့သောအဘို့ဟုမေး၏။ တင့်ကား, ဒီဇယ်နှင့်ဓာတ်ဆီ Blend နှင့်ရေနံရေနံတင်သင်္ဘောဖမ်းမိသူကိုအရည်ပျော်ပစ္စည်းရေနံ 10 အရေအတွက်ကိုရောင်းချပေးထံမှ Hidden ။ အိုင်တီပြစ်မှုဆိုင်ရာ, SAMPLE ၏ပုံပေါ် ...
တူရကီမီးရထား phot ပိုင်ရုံများတည်ဆောက်အော်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ Paraza ကူးပြောင်းခံရဖို့ 05 / 05 / 2014 Nazilli အသုံးမပြုကိုရောင်းခံရဖို့အော်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်များ၏စင်တာများdönüştürülücek TCDD ပေါ်ပြုပြင်လေယာဉ်ရုံဖြတ်သန်းပြီးနောက်: တူရကီမီးရထားကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်ရုံအော်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ Paraza ကူးပြောင်းခြင်းကို phot ။ အော်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်များ၏စင်တာများဖြတ်သန်းပြီးနောက်ပြုပြင် Nazilli dönüştürülücekအတွက်မီးရထားကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်သောအသုံးမပြုတဲ့လေယာဉ်ရုံကိုရောင်းပါလိမ့်မည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mehmet Okur သည်လေယာဉ်ရုံများတွင်ရရှိမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ, အာဏာပိုင်များ၏လုပျငနျးနဲ့ပတျသကျတဲ့သတငျးအခကျြကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ထိုအခါစာဖတ်သူတစ်ဦးကကြေညာချက် "ငါကဒီမှာတည်းခိုကြပါပြီနှစ်ပေါင်းများစွာပျင်းရိနေကြသည်ကိုအသုံးမပြုနှင့်ပျက်စီးယိုယွင်းစွန့်ပစ်တဲ့နေရာ။ ကျနော်တို့စီမံချက်၏အလုပ်သမားသမဂ္ဂများမှာကျေးရွာ of Service ကို Nazilli ခရိုင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုနှစ်ခုစလုံးပေးကြဖို့အဆောက်အဦး၏ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းမှပြန်လည်နာလန်ထူဖို့နောက်ဆက်တွဲနှင့်တစ်ဦးကောင်းတဲ့ပြင်ဆင်ကြပြီ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ကုန်ပစ္စည်း R & D နဲ့ TULOMSAS ဟောင်း APK ကိုဦးစီးဌာနတိုက်ခန်းအဆောက်အအုံခေတ်မီ 24 / 10 / 2016 TULOMSAS အဆောက်အအုံ TULOMSAS ဟောင်းများကိုထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၏ဟောင်းများကိုထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်းနှင့် APK ကိုနှင့်အတူဦးစီးဌာနကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ကုန်ပစ္စည်း R & D ဦးစီးဌာနမှခေတ်မီ TULOMSAS အထွေထွေညွှန်ကြားမှုများနှင့်အဆောက်အဦးများဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ်များ၏ APK ကိုနှင့်ကုန်ပစ္စည်း R & D ဦးစီးဌာနမှခေတ်မီရုံးကိုထိန်းချုပ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2016 / 434614 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Ahmet ကြက်မွေးမြူရိပ်သာလမ်း 26490 Tepebasi / ESKİŞEHİRခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်:0(222) 224 00 00 / 4435-4436 -0(222) 225 50 60 - 225 72 72 ဂ) အီလက်ထရောနစ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အချက်ပြပစ္စည်းအီလက်ထရွန်နစ်ကတ်များနှင့်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်လိမ့်မည် 28 / 04 / 2014 TCDD ညွှန်ကြားရေးမှူး2.BÖLGလက်ခံရရှိအီလက်ထရောနစ်ကတ်များနှင့်အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းကိရိယာတို့အတွက်ပစ္စည်းများပြကမ်းလှမ်းချက် SUBJECT ကိုနူးညံ့ RELATED Entity 1 ချုပ်ဝင်အပေါ်အပိုဒ် 1.1- ပြန်ကြားရေးအရေးကြီးမဟုတ်ပါပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါစာချုပ်ဝင် Entity; က) အမည်: TCDD 2.BÖLGညွှန်ကြားရေးမှူးကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးကော်မရှင်ခ) လိပ်စာ: Behicbey / တူရကီဂ) တယ်လီဖုန်းနံပါတ်: 0312 211 14 49 ဃ) ဖက်စ်နံပါတ်: 0312 211 12 25 င) E-mail ကိုလိပ်စာ: bsrmeletl အဆိုပါ @ gmail .com, f) သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအမည်နှင့်အမညျ / ခေါင်းစဉ်: Basri / ကော်မရှင်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် 1.2 ၏ MELETL ။ အထက်ပါလိပ်စာနှင့်အရေအတွက်ကိုမှာအဆက်အသွယ်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်စပ်လျဉ်းနုသတင်းအချက်အလက်အတွက်လေလံ ...
boron ခွဲရုံ, 154 စီမံကိန်းသဘောတူညီချက်မှAraplıခွဲရုံနဲ့ Transmission Line Withdrawal Boğazköprüကေဗွီခွဲရုံနုဆုရှင် Fira နှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးရန်
တူရကီပထမပြည်တွင်းထုတ်ကုန်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Initiatives လာရောက်ပူးပေါင်း
Altepe: တူရကီအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း Silkworm ကျနော်တို့ကိုပြသလိမ့်မယ်
ကုမ္ပဏီဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါအနိုင်ရနှင့်အတူ Transformer ခွဲရုံနှင့်Pozantıတာရှုမွို့ 154 ကေဗွီ OHL Withdrawal စီမံကိန်း Center ကစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး
ပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားရေးထုတ်လုပ် GEN အမှတ်တံဆိပ်ကားအသစ်
မှောင်ခိုလောင်စာဆီရောင်းချနေကုန်သည်တွေ၏ကာကွယ်ရေး TCDD site ကိုမှမေးမွနျးခဲ့သညျ
တူရကီမီးရထား phot ပိုင်ရုံများတည်ဆောက်အော်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ Paraza ကူးပြောင်းခံရဖို့
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ကုန်ပစ္စည်း R & D နဲ့ TULOMSAS ဟောင်း APK ကိုဦးစီးဌာနတိုက်ခန်းအဆောက်အအုံခေတ်မီ